Ogaden News Agency (ONA) – War murtiyeedka ka soo baxay shirweynihii 8aad ee jaaliyadaha Pacific-ga
War murtiyeedka ka soo baxay shirweynihii 8aad ee jaaliyadaha Pacific-ga
Shirwaynihii 8aad ee Pacific-ga oo lugu qabtay magaaldaPerth(caasimada galbeedkaAustralia) mudadii u dhaxaysay 20-kii ilaa 21-kii bishan April ayaa ku dhamaatatay guul lagu naaloon karo. Shirkaasoo ay ka soo qayb galeen wafuud farabadan oo ka kala timid jaliyadaha Ogadenia eepacificaiyo Yurub.
Shirkan waxaa goob jog ka ahaa mdax badan oo JWXO ah, oo uu hogaaminay Gudoomiye ku xigeenka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia Mudane Maxamed Imaaciil Cumar iyo Afhayeenka JWXO Mudane Cadaani Hiirmooge. Sidoo kale waxaa shirkaa ka soo qayb galay marti sharaf ka socotay jaaliyada Soomaaliya een walaalha nahay, jaaliyada Oromada iyo mudanayaal ka socday baarlamaanka degaanka magaaladaPerth.
Waxaa shirkan lagu soo bandhigay wax qabadka muuqda ee ay gaadhay jaaliyadaha Ogadenia ee Pacific-ga asanadkii tagey. Waxaa kale oo lagu lafa guray qodabo muhiim ah oo ku saabsan xoojinta wax qabadka jaaliyadaha iyo horumarinta halganka xaqa ah ee shacabka Ogadenia oogu jiro aaya ka tashigiisa.
Shirkan oo loo agaasimay si heersare ah, loona daadihiyay si cilmiyaysan, ayaa waxaa ka soo baxay go’aamo dhaxal gal ah oo wax wayn ku soo kordhin doona fagaaraha halganka Ogadenia iyo qaab shaqaynta jaaliyadaha pacific-ga. Qodobada muhiimka aha ee Shirwaynaha ka soo baxay waxaa kamid ahaa:
* In lasii laban laabo wax qabadka jaaliyadaha Ogadeniya ee Pacific-ga dhankastaba
* In la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya jaaliyadaha Ogadenia ee Pacific-ga iyo kuwa aan walaaha nahay ee Soomaaaliyeed iyo jaaliyadaha dadyowga aan saaxibada nahay sida, Oromada, Binushangol, iyo kuwa kale ee ku hoos jira guumaysiga Ethiopia.
* In si dhab ah loogu soo bandhigo caalamka tacadiyada xuquuqda Adamiga ee Gumeysiga Itobiya u gaysto shacabka dulman ee Somalida Ogadenia.
* In la xoojiyo waxqabadka diplomasiyadeed iyo warfaafineed ee Jaliyadaha Ogadeniya si loo fidiyo xaqnimada qadiyada Ogadeniya looguna kasbo saaxiibo waxter leh.
Shirku wuxuu bogaadin weyn iyo ammaan ballaadhan u soo jeediyay shacboweynaha geesiga ah ee Ogadenia, ee u gegsaday caddaadiska iyo gumaadka bahalnimada ah ee Taliska woyanahu kula kaco shacbiga aan waxba galabsan. Sidookale wuxuu bogaadin iyo hambalyo diiran u dirayaa shirku CWXO ee dhiigooda qaaliga ah u huray difaaca dadkooda dulmiga lagu hayo.
Shirweynahaa 8aad ee jaaliyadaha Pacifica wuxuu cambaarayn iyo dhaleecayn kulul dusha kaga tuurahayaa Taliska TPLF ee gumaadka iyo xadgudubka joogtada ah ku haya shacbiga birimagaydada ah ee somalida Ogadeniya ; xasuuqa, go’doominta dhaqaale iyo ka horjoogsida deeqa bulshada dunidu ugu deeqday shacbiga S. Ogadenia waa isir-tir cad(genocide) sida ku cad xeerar caalamiga ee xuquuqd aadanah.
Shirku wuxuu ugu baaqahayaa, QM, ururada caalamiga ah, iyo dowladaha deeqda siiya Itobiya in cunuqabayn adag lagu soo rogo xukuumada dhiigaya cabta ee Ardisabab,lagu cadaadiyo inay joojiso gumaadka iyo gaajeynta ay ku hayso Somalida Ogadernia.
Mintid Midnimo Iskutashi Guul